Home Wararka Isaias Afwerki oo sheegay in qaabka Fedaraalka carqalad ku yahay Somaliya loona...
Isaias Afwerki oo sheegay in qaabka Fedaraalka carqalad ku yahay Somaliya loona bahan yahay in laga taqaluso (daawo)
Madaxweynaha dalka Eritereeya Isaias Afwerki oo qayb wayn ka qaatay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya aya markale ka dhawaajiyay in Soomaaliya ayan u baahnaynin dowlad goboleedyo oo ay u baahan tahay dowlad dhexe oo xoog leh. Hadalka asbuucaan ka soo yeeray Isaias Afwerki ayaa waxa uu ku soo aaday iyada oo MW Farmaajo heshiis hoose la galay dalalka Eritereeya iyo Itoobiya kaas oo ah in ciidan ka badan 20,000 dalka Soomaaliya la keeno si MW Farmaajo xoog loogu hoos keeno dalka oo dhan.
Madaxweyne Isaias Afwerki ayaa Soomaaliya u istcimaalay xiligii dagalada sokeeye awood uu kula dagaalo dalka Itoobiya waxa uuna taageero dhaqaale iyo mid ciidanba siin jirin dhamaan kooxaha mucaaradka ah oo ay ku jireen kooxaha mayalka adag oo kumanaan Soomali ah horay ugu xasuuqay dalka gudihiisa gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya.
Hadalka uu MW Isaias Afwerki asbuucan ka jeediyay dugsiga caafimaadka ee magaalada Asmara waxa uu daba socdaa hadal uu dhowr sano ka hor ku cadeeyay in uu taageero kooxaha argagaxisada ee ka dagaalama Soomaaliya isala markaana uu uga soo horjeedo dowlad goboleedyadda. Wareesyi uu siiyay wariye Jamal Cusmaan dhowr sano ka hor ayuu ku cadeeyay moowqifkiisa.
Halkaan ka daawo Video:
Previous articleWaa maxay ujeedada ciidamada Itoobiyo iyo Eritereeya ee dalka la keenayo dhawaan (Xog – Daawo)
Next articleKooxo hubeysan oo qof shacab ah ku dilay Degmada Afgooye
Farmajo: Shisheeyaha Na Biila(IC) Taladooda ma Ogolin, Laakiin IGAD(Itoobiya) ayaa Noo...
AMISOM oo burburisay miinooyin lagu aasay wadooyinka gala Jowhar